Hanangana Tetezamita indray: tena miketrika ny tsy hisian’ny fifidianana i “Deba” | NewsMada
Hanangana Tetezamita indray: tena miketrika ny tsy hisian’ny fifidianana i “Deba”
Miketrika mafy i « Deba ». Araka ny loharanom-baovao, mitady ny fomba rehetra tsy hirosoana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra izao ny kandidà Ratsiraka. Anisan’ny hovoiziny amin’ilay fandaharana manokana ao amin’ny fahitalavitra iray, anio, izany. Anisany tolokevitra hoentiny ny hirosoana amin’ny fitondrana Tetezamita ka mbola mijanona amin’ny toerany Rajaonarimampianina. Hatao amin’ny volana mey 2019 kosa ny fifidianana. Anisan’ny anton’izany ny tsy faneken’izy ireo hanaovana fifidianana amin’ny fotoam-pahavaratra ary ny fanahian’i « Deba » fa mety ho tonga amin’ny ra mandriaka ny raharaha. Tsy vitan’izany fa mitaky amin’ny HCC handray ny fepetra rehetra hamelezana ny kandidà Rajoelina amin’izao fitsidiham-paritra ataony izao ny Amiraly.
Fanilihana an-dRajoelina sy Ravalomanana…
Manampy izany ny nametrahan’ny kandidà Randriamorasata Solo Norbert fitoriana eny Ambohidahy hanintsanana ny mpanorina ny IEM tsy ho kandidà noho ny ambarany fa fanonganam-panjakana nataony. Nanamarinany izany ny sata afrikanina ho an’ny demokrasia tsy mamela ny nanongam-panjakana hiatrika fifidianana, araka ny tohan-keviny.
Etsy andaniny, tokony hamoaka ny fanapahan-keviny, anio, ny eo anivon’ny filankevi-panjakana manoloana ny fitorian-dry Tabera Randriamanantsoa ny fanjakana amin’ny ambaran’izy ireo fa tsy mbola nisian’ny didy fanaikana ny mpifidy hiatrika fifidianana ny 7 novambra izao. Mbola anisan’ny ekipan’i “Deba” miaraka amin’ireo kandidà 10 nailiky ny HCC sy ireo enina hafa afaka mirotsaka rahateo ity olon’ny Pr Zafy ity. Mety hiseho amin’ny fahitalavitra miaraka amin’ny Amiraly avokoa izy ireo, anio.
Tombanana fa mety hamely mafy sy tsy hamela ireo kandidà telo : Ravalomanana sy Rajoelina ary Rajaonarimampianina hirotsaka hofidina koa Ratsiraka.
Tsy maintsy hirosoana ny fifidianana
Na eo aza anefa ireo rehetra ireo, efa nanitrikitrika ny filoha nasionalin’ny Avi, Ratsirahonana Norbert Lala, fa tsy maintsy hirosoana ny fifidianana ary tsy misy adihevitra azo atao intsony. “Hany vahaolana hivoahana amin’izao olana rehetra izao ny fifidianana. Tsy misy fifampiraharahana na anatiny na ivelany. Na ho tonga eto aza ny fianakaviambe iraisam-pirenena”, hoy izy teny Andrainarivo, ny asabotsy teo.
Araka izany, andrasana ny hambaran’i “Deba”. Tsy mandeha ho azy rahateo ny tenany nirotsaka hofidina io fa misy paikady sy tetika… maloto indray hatao eto amin’ny firenena ?